Mpitoriteny 5: 1-19
Mpitoriteny 4 Mpitoriteny 5 Mpitoriteny 6
Aza haingam-bava, ary aza malaky manonona teny eo anatrehan'Andriamanitra ny fonao; fa Andriamanitra dia any an-danitra ary hianao ety an-tany, koa aoka ho vitsy ny teninao.
Raha mivoady amin'Andriamanitra hianao, aza manao ampitso lava: fa tsy ankasitrahany ny adala; koa efao ny voadina.
Aza avela hahatonga heloka amin'ny tenanao ny vavanao; ary aza manao eo imason'ny anjely hoe: Niteny tsy nahy aho; nahoana no ho tezitra amin'ny teninao Andriamanitra ka hanimba ny asan'ny tànanao?
Raha hitanao ny fampahoriana ny malahelo sy ny famadihana ny fitsarana sy ny rariny amin'ny tany, dia aza gaga amin'izany; fa misy ambony kokoa mibanjina ny ambony, ary mbola misy ambony noho ireo indray aza.
Izay tia vola tsy hety ho voky vola, ary izay fatra-pitia harena be tsy hety ho vokin'ny fitomboan-karena; fa zava-poana koa izany.
Mamy ny torimason'ny mpiasa, na homan-kely na homam-be izy, fa ny haben'ny ananan'ny manan-karena kosa no tsy ahitany tory.
Misy ratsy mahory efa hitako aty ambanin'ny masoandro, dia harena tehirizin'ny tompony,nefa mampidi-doza amin'ny tenany;
sady levona izany harena izany noho ny loza manjo; ary miteraka zazalahy ralehilahilahy nefa tsy misy na inona na inona eny an-tànany.
Indro, efa hitako izay soa sy izay tsara, dia ny mihinana sy misotro ary mifaly amin'ny fisasarana rehetra izay isasaran'ny olona aty ambanin'ny masoandro amin'izay andro vitsy iainany omen'Andriamanitra azy; fa izany no anjarany.
Ary koa,ny olona rehetra izay omen'Andriamanitra vola aman-karena sady omeny fahefana hihinanany azy sy hahazoany ny anjarany sy hifaliany amin'ny fisasarana, dia fanomezan'Andriamanitra izany.